By: रञ्जन अधिकारी - पुष २१ २०७८ बुधबार १३:५०-
गत पुस १६ गते दिउँसो पोखराको जिरो किमिस्थित पामे चापाकोट सुनचाँदी दुकानमा गहना किन्ने बहानामा सिक्री चोरी गरेर फरार युवती पाँचौ दिनमा आफै सम्पर्कमा आईन् । चार दिनसम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसकिरहेका बेला गण्डकन्यूजमा सबैभन्दा पहिले समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
मिडियामा समाचार र सिसीटिभी भिडियो भाइरल बनेपछि युवती आफै सम्पर्कमा आइन् । र भनिन् – ‘प्लिज भाइरल नबनाइदिनू, समाचार डिलिट गरिदिनू ।’
आफ्ना दाइ दिदीमार्फत् पनि मिडियामा समाचार, भिडियो डिलिट गर्न भनिन् । उनले आफू पोखराको नभई पाल्पाको भएको बताईन् । २–३ दिनमा पोखरा आउने र बिल लिने भन्दै गहनाको पैसा बैंक मार्फत् नै पठाइदिने भनिन् । तर, पसलका सञ्चालक केशव घतानेले आफूलाई फोन आएको नम्बर वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा फरवार्ड गरेपछि मात्र प्रहरीले महिलालाई सम्पर्क गरेको हो । आफू २१ वर्षीया बताउने ति युवतीले ब्याचलर फर्स्ट ईयर अध्ययनरत विद्यार्थी रहेको बताएकी छन् ।
प्रहरीले युवतीबारे केही पनि सार्वजनिक गरेको छैन । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामकी प्रमुख डिएसपी चिनीमाया तामाङले अहिले बैदाम हिरासतमा रहेको मात्र उल्लेख गर्दै थप प्रवक्ताबाट बुझ्न भन्दै पन्छिन् । कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुन्दर तिवारीले जाहेरी नपरेकाले युवतीबारे थप खुलासा गर्न नमिल्ने बताउँछन् । यसअघि उनले घटनाबारे थाहा नभएको बताएका थिए ।
समाचार भाइरल भएपछि युवतीले के भनिन् ? पसल सञ्चालक केशव घताने र उनका वुवा हर्कबहादुर घताने के भन्छन् ? भिडियोमा हेर्नुहोस्
गण्डकन्यूज समाचार प्रभावः सुनको गहना चोरी गर्ने युवती ‘समाचार डिलिट गरिदिनू’ भन्दै सम्पर्कमा आइन्